Ciidanka Dab-demiska oo Hawlgalo ka Fuliyay Hargeysa iyo Wajaale | Dhaymoole News
Ciidanka Dab-demiska oo Hawlgalo ka Fuliyay Hargeysa iyo Wajaale
Allaah ha u naxariistee Wiil yar ayaa ku geeriyooday Dhaam-biyood ku yaalla Koonfurta Magaalada Hargeysa, waxaana Meydkiisa halkaa ka soo saaray Ciidammada Dab-damiska.
Sidoo kale, Carruur Hooyadood Guriga Dusha kaga xidhay oo Gurigii ku gubtay ayaa Ciidammada dab-damisku u gurmadeen isla-markaana soo samato-bixiyeen.
Wararkaa iyo Warar kale oo la xidhiidha Booyad Shidaal oo Rogmatay, Shinni Dad cuntay iyo Geerash gubtayba waxa lagu faahfaahiyey war qoraala oo ciidammada Dab-damiska, ay ka soo saareen, kaasi oo isagoo qoraal ah u dhignaa sidan “Ciidanka Dab-demiska Somaliland ayaa maanta ka hawlgalay hawlgalo tiro badan oo ahaa Lix Hawlgal, kuwaas oo ka dhacay Degmooyinka Hargeysa iyo Deg/Wajaale.
Hawlgalka labaad ayaa ciidanku kaga hawlgaleen Laba Caruura oo Hooyadood guriga dusha kaga xidhay, kadib guriga dab qabsaday iyadoo Caruurtiina guriga hoosta kaga jiraan, Markii yeedhmadaasi soo gaadhay Qolka Hogaaminta, Ciidanka Dab-demisku si degdega ayay uga hawlgaleen waxaanay caruurtaas ka soo samatabixiyeen guriga.
Sidoo kale, ciidanka ayaa damiyay dab weyn oo ka kacay gurigaas waxaanay ciidanku ku guuleysteen inay dabkaas damiyaan kana xakameeyaan Qolalka inta kale.
Dhinaca kale, waxaa iyadana Degmada Maxamuud Haybe ee Magaalada Hargeysa ciidanku damiyay Dab Qabsaday Guri Jiingada oo ku yaalla Xaafadda Cabdi Qalaaf, Dabkan ayaa la damiyay waxaana ka dabkaas ka hawlgalay Ciidanka Xarunta Maxamuud Haybe.
Gabagabadii wuxuu ciidanku wacyigelin u soo jeedinayaa gaar ahaan Hooyooyinka inaanay Caruurta Guryaha dusha kaga sii xidhin markay ka baxayaan, taasi waxay sababi kartaa khatar ah in haddii dab qabsado guriga caruurtu ay ku naf waayi karaan halkaas.
Sidoo kale, iyadoo wakhtigan lagu jiro xilli-roobaadkii Dhaamamka iyo Balliyaduna buuxaan in waalidiintu ay carruurtooda ka ilaaliyaan Balliyada”